January 27, 2018 – Kalika Khabar
January 27, 2018 adminLeaveaComment on मैले केही गर्न पाइन ! : देउबा
२०७४ माघ १३ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले चाहेके केहि गर्न नपाएको बताएका छन् । काम चलाउ सरकारले दिर्घाकालीन महत्वको निर्णय तथा नियुक्तहरु गर्ननहुने भन्दै आलोचना आलोचना आइरहेको बेला देउवाले भने, आफुले केही गर्न नपाएको बताएका हुन् । माघ ११ गते शनिबार बीपी स्मृति अस्पतालको नयाँ भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा भने`मैले केही गर्न पाइन् कहिले […]
जेलबाट भागेको टिकेलाइ २ गोलि लाग्यो!!
January 27, 2018 adminLeaveaComment on जेलबाट भागेको टिकेलाइ २ गोलि लाग्यो!!
२०७४ माघ १३ काठमाडौं । काठमाडौं स्थित डिल्लीबजार कारागार बाट भागेका टिके भनिने कैदी टिकाबहादुर थापा पक्राउ परेका छन् । टिके ले प्रहरिलाइ नै गोलि चलाएपछी प्रहरीले जवफी फायरिङ गरेको हो। पक्राउ गर्ने क्रममा आफुहरुमाथि गोली चलाएपछि जवाफी फायरिङ गरेको प्रहरिले बताए। चितवनको रामनगरमा टिके र प्रहरी टोलीबीच गोली हानाहान भएको हो । प्रहरीको गोलि […]
January 27, 2018 adminLeaveaComment on के तपाई Japan जाने सोचमा हुनुहुन्छ?
२०१४ माघ १३ काठमाडौं । यदी हुनुहुन्छ भने जापानमा पढाई, काम, भाषापछाडी University कसरी apply गर्ने, कसरी कम खर्चमा जान सकिन्छ, र आफ्नो DEPENDENT लाई कसरी बोलाउने यी सबै कुराहरु बुझेर मात्र apply गर्नुपर्छ . यदी सबैकुराहरु जान्न चाहानुहुन्छ भने हामी तपाइलाई निसुल्क परामर्स गर्न तयार छौ . FOR MORE DETAILS Contact Us: FLY WORLD […]
माओवादीको उमेदवार अपांग कोटाबाट सपाङ्
January 27, 2018 adminLeaveaComment on माओवादीको उमेदवार अपांग कोटाबाट सपाङ्
२०७४ माघ १३ काठमाडौं । माओवादीले राष्ट्रियसभामा अपाङ्ग कोटामा सपाङ्गलाई उम्मेदवार बनाएको आरोप छ।काङ्ग्रेस का उमेदवार गोपाल प्रसाद सर्माले उनका विरुद्ध उजुरी दिएका छन । प्रदेश न.६ बाट राष्ट्रिय सभामा माओबादी केन्द्रबाट अपाङ्ग तथा अल्पसंख्यक कोटामा जीवन बुढा उम्मेदवार बनेका हुन। बुढाका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका उम्मेदवार गोपाल प्रसाद शर्माले निर्वाचन कार्यालयमा सपाङ्ग लाई अपांग कोटाबाट उम्मेदवार […]
देउवा सरकारले जनमतको कदर गरेन: प्रचण्ड
January 27, 2018 adminLeaveaComment on देउवा सरकारले जनमतको कदर गरेन: प्रचण्ड
२०७४ माघ १३ चितवन । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देउवा सरकारले जनमतको कदर नगरेको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले गरेको निर्णयहरुबारे एमालेले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेको धारणामा माओवादीको सहित सहमति रहेको माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहालले बताए । भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरु सँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले देउवा सरकारका पछिल्ला निर्णयहरु गलत भएको र […]
राष्ट्रियसभाको उमेदवार छान्दा ठुला दलमा असन्तुष्ट
January 27, 2018 adminLeaveaComment on राष्ट्रियसभाको उमेदवार छान्दा ठुला दलमा असन्तुष्ट
२०७४ माघ ११ काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको चुनाव यहि माघ २४ गते हुँदै छ। उम्मेद्बारी दर्ता यहि बुधबार भएको थियो। राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि दलहरुले छनोट गरेका उम्मेदवार सबैजसो राजनीतिक दलहरुमा असन्तुष्टि छाएको छ । सबै दलहरुमा नेतृत्वले अन्याय गरेको छ। नेकपा एमाले मा गङगालाल तुलाधर, ठाकुर गैरे आदिले टिकट नपाएको र कोमल ओलि जस्तालाई पार्टीले […]